Kodzero-dzevanhu, 02 Zvita 2017
Mugovera 2 Zvita 2017
Zvita 02, 2017
Masangano Otaura Shuviro Yawo kuHurumende yaVaMnangagwa
Vanhu vanodarika mazana mashanu vanobva kumasangano nemakereke akasiyana siyana, vakaungana muHarare vachikurukura zvavanoshuvira kuhurumende itsva yaVaEmmerson Mnangangwa.
Nhepfenyuro dzeMatunhu Dzotepfenyura paFacebook neIndaneti
Nhepfenyuro dzemumatunhu dzakaita chisungo svondo rino chekutanga kutepfenyura pamadandemutande akaita seFacebook nemamwe dzakamiriria kuti hurumende yaVaMnangagwa idzipe marezenisi.
Kuitwa Gurukota kwaVaShiri Kworumbidzwa kuMash West
Kunyange vanhu vakawanda vasina kufarira makurukota akadomwa nemutungamiri wenyika mutsva, VaEmmerson Mnangagwa, vaimbove varwiri verusununguko nevamwe vanhuwo vanofarira kugadzwa kwemukuru wemauto emuchadenga, VaPerence Shiri, segurukota rezvekurima neminda.
Varairidzi Vofarira Kubviswa kwaVaDokora
Varairidzi vanoti vatambira nemufaro kubviswa kwevanga vaitwa gurukota rezvedzidzo yePrimary and Secondary, VaLazarus Dokora, muhurumende itsva yaVaMnangagwa vachiti Va Dokora munhu singateereri varairidzi.
Zvita 01, 2017
VaMutsvangwa Vovimbisa Vatori veNhau Uchi neMukaka
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaChris Mutsvangwa, vanoti vanoda kubvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo.
Mukombe weCastle Lager Challenge Wotsviriridza neMugovera kuMandava Stadium
Nzira dzese munhabvu dzichange dzakananga kunhandare yeMandava Stadium kuZvishavane uko mhuri yese yemutambo uyu iri kuungana.
VaMnangagwa Vanoudzwa Kuti Varerutsire Vadzidzi
Vadzidzi vepachikoro chikuru cheChinhoyi University of Technology, vaudza mutungamiri wezvikoro zvose zvepamusoro uye vari mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vadzose mari yekudzidza inopihwa nehurumende.
Vanhu Vanoti Hapana Chitsva Chakanyanya Mudare reMakurukota aVaMnangagwa
Vamwe vakawanda vari kushora dare remakurukota rasarudzwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara muhurumende kwenguva yakareba.
VeChiuto Vanopinzwa muHurumende yaVaMnangagwa
Veruzhinji vashora mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nekudoma vari muchiuto pamwe nevanhu vagara vari muhurumende yevaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe kuti vapinde mudare remakurukota ehurumende vachiti hapasisina tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka munyika.
Mbudzi 30, 2017
VaMnangagwa Vanodoma Dare reMakurukota Rine Mauto Mukati
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vadoma makurukota achange achishanda navo muhurumende kudzamara munyika maitwa sarudzo gore rinouya.
Mapato Anopikisa Anoti Achakunda Musarudzo Gore Rinouya
Mapato anopikisa anoti haasi kumbovhundutswa nekuchinjwa kwehutungamiriri hwemubato reZanuPF achiti ane chivimbo chekukunda musarudzo dza2018.
Zanu-PF Haina Mukana Musarudzo Gore Rinouya
Vamwe vanhu vanoti mukana wekuti bato reZanu PF rikunde musarudzo dzegore rinouya mudiki sezvo chimwe chikwata chairwira masimba cheG40 chichigona kuita zveshaisano.
Shamwari Dzorangarira VaZindove Vachadzikwa kuBikita neMugovera
Komisheni yaVaMotlanthe Yoronga Kudaidza VaMnangagwa naVaChiwenga
Varwere Voomerwa neKushaikwa neKudhura kweMishonga
ZCTU Yomhang'arira Hurumende kuSangano reVashandi Pasi Rose re ILO
Vakakwikwidza Vakazvimrira Vodzingwa muMDC yaVaChamisa?